I-China indlela yokusebenzisa abavelisi be-lancet yegazi kunye nabathengisi | EMVA
Uyisebenzisa kanjani iincanca zeGazi?
Ngoku iintsuku ziyanda abantu banika ingqalelo ngakumbi kwimpilo yabo kwaye baye kwiziko lonyango ukunika impilo yabo ukuskena ngokupheleleyo. Ngenxa yesi sizathu isidingo se-lancet yegazi amaxesha ama-3 kunangaphambili. Uyisebenzisa kanjani i-lancet yegazi yaba yinto ebaluleke kakhulu. Indlela yokusebenzisa i-lacet yegazi ngendlela ekhuselekileyo iye yabaluleka ngakumbi.
Ngoku makhe sifunde indlela yokusebenzisa uhlobo lwe-lancet yegazi.
Uyisebenzisa kanjani i-Press Blood Lancet
Inyathelo 1 Khupha ikepusi yokukhusela kwaye uyilahle kwaye uyigcine ikepusi kwindawo elungileyo.
Inyathelo 2 Beka i-lancet fimly ngokuchasene nendawo yokuhluza ukuze isebenze. Sukususa isixhobo de kube kuvakale ukucofa okuvakalayo.
Inyathelo lesi-3 Lahla i-lancet esetyenzisiweyo kwisikhongozeli esifanelekileyo soshicilelo esine-cap ekwi-lancet.
Cinezela 2 i-lancet yegazi
Inyathelo 1 Ijija ikepusi de yahlule ngokulula kumzimba we-lancet. Musa ukutsala.
Ukuba uyayitsala, inaliti iya kukhutshwa kwaye i-lancet isetyenziswe njenge-lancet;
Inyathelo lesi-2 Inyathelo lesi-2 Beka i-lancet ngokusesikweni kwisiza sokuhluza ukuze isebenze. Sukususa isixhobo de kube kuvakale ukucofa okuvakalayo.
Inyathelo lesi-3 Yilahla i-lancet esetyenzisiweyo kwisitya esifanelekileyo se-sharps. I-lancet esetyenzisiweyo inokuba negazi elininzi kuyo.
Ulwazi lwe-lancet yegazi ye-ORIENTMED
I-ORIENTMED inokubonelela ngeendlela ezahlukeneyo zegazi. I-twist lancet, cinezela i-lancet, iintlobo ezahlukeneyo ze-lancets ezikhuselekileyo, kunye ne-Heel lancet. Iilancets zegazi sele zifumene isatifikethi se-CE kunye ne-FDA.
Ngokusekwe kumgangatho ogqwesileyo kunye namaxabiso afanelekileyo, siphumelele igama elinoxanduva kwiindawo ezininzi ezahlukeneyo, ezinje ngeJamani, iFrance, iKazakhstan, iRussia, iKuwait, iAustralia, uMzantsi Afrika, iUnited States, uMzantsi Melika njalo njalo. Ngokukodwa eChile naseMid-mpuma, sinabathengi abaninzi.